साख र साक पिउने | Experience Japan
› ब्लग Nepali › साख र साक पिउने
साख र साक पिउने
शाके वास्तवमा जापान nihonshu वा seishu भनिन्छ र मनपर्ने पेय त्यहाँ एक हजार वर्ष को लागि गरिएको छ। जबकि यो पहिलो चीन मा 689 AD जापान मिति, उत्पादित चामल पेय को रेकर्ड थियो विश्वास छ। यो नाम ‘को देवताहरूको पी’ यो धेरै धार्मिक समारोह मा प्रयोग भएको थियो रूपमा दिइएको थियो। Omiki भनिन्छ एक परम्परागत अनुष्ठान एक धार्मिक सहभागिता रूपमा खातिर पिउने मान्छे पनि समावेश छ। यो कि एक पल्ट तिमी यसलाई पिउन तपाईं नजिक देवहरूलाई भएका छन् विश्वास छ। खातिर उत्पादन सरकार नियन्त्रित थियो, तर 10 औं शताब्दीमा, जापानी भिक्षुहरूले उनीहरूको मन्दिर र shrines बाहिर प्रयोगको लागि खातिर बनाउँने गर्न थाले। यो महंगा, साथै एक स्थितिलाई उठयो सक्छ गर्नेहरूका लागि प्रतीक बनेर को पेय परिणाम। 1868 बाट विज्ञापन आफ्नो शासनकालको सम्राट Meiji अन्तर्गत व्यवस्था तिनीहरूले निर्दिष्ट नियमहरु पछि रूपमा जो कोहीले रूपमा लामो खातिर उत्पादन सकून् भनेर परिवर्तन गरेका थिए। लगभग 30,000 Breweries एक्लै एक वर्ष मा चल्यो। महिला खातिर बनाउन ठूलो भूमिका लिएर चाँडै उपनाम ‘घर को रक्सी खींचना मालिकको’ छानिएन। मानिसहरू 16 औं शताब्दीतिर लियो र खातिर उत्पादन अझै पनि एक पुरुष प्रभुत्व उद्योग छ। खातिर चाँडै अब विश्वभरिका फेला जापान र Breweries गर्न यात्री एक हिट भए।
खातिर शब्द संग्रह:
Choko: लघु सजाया कप मा जोडीकिनेको
Oshakuछ:प्रयोग बेहोरा साझेदारी खातिरगर्दा:
Sakazukiचियर्स:पिउने लागि लघु समतल सजाया पकवान
खातिर समावेशसुराही आकारको Tokkuri
पीने खातिर प्रक्रियाकन्टेनर:
त्यहाँ विनम्र छन् खातिर पिउने गर्दा विचार गर्न courtesies। एक खातिर पिएको खाना हुनुपर्छ भन्ने छ। यहाँ यो परम्परागत पेय कदर गर्न मदत गर्न केही संकेत हो।
1 तपाईं खातिर आदेश, यो एउटा tokkuri भनिने सुराही आकारको कन्टेनर मा पुग्नु हुनेछ। यो पिएको तातो वा चिसो हुन सक्छ, तर अधिकांश मानिसहरू यो चिसो त्यसैले तिनीहरू आफ्नो स्वाद को सबै स्वाद गर्न सक्छन् पिउने विचार गर्नुहोस्।
2. तपाईंले साथीहरूसँग हो भने, तपाईंले सधैं आफ्नो पेय तिनीहरूलाई लागि खन्याउन गर्नुपर्छ। तिनीहरूले त्यसपछि tokkuri सुराही टिप्न र तपाईं को लागि खातिर खन्याउन हुनेछ। यो अनुकूलन oshaku भनिन्छ र पनि तपाईं आफ्नो कप पूर्ण रहनुपर्छ भन्ने जाँच आवश्यकता – यो खाली छैन पनि भने।
3. खातिर पिउने लागि कप विभिन्न प्रकारका छन्। एक sakazuki एउटा सानो पकवान हुँदा Choko दैनिक प्रयोगको लागि एउटा सानो कप छ। यो नयाँ वर्ष चाडहरूमा र ठूलो banquets सहित औपचारिक अवसरमा लागि प्रयोग गरिन्छ।
4 तपाईंले साथीहरूसँग हो भने,आफ्नो कप वा पकवान उठाउनु र, भन्न अब साना sips आफ्नो खातिर आनन्द र यसको स्वाद र सुगन्ध दुवै स्वाद सम्झना “Kanpai!”।
जानिन्छ:शाके बारेमा मजा तथ्य
1 अक्टोबर 1 रूपमा जापान मा आधिकारिक शाके दिन। जापानी मा, यो कुनै नमस्ते nihonshu उच्चारण गरिएको छ।
2. शाके अन्य मादक पेय भन्दा बढी ‘खाना अनुकूल’ मानिन्छ। अरूलाई नभई कुनै टेन्निसको वा उच्च अम्लता adversely आफ्नो खाना को स्वाद असर हो। यो पनि लस र परिरक्षकों।मुक्त
3. जापान माछ,पिउने खातिर स्वास्थ्य लाभ गर्न स्वीकार गरिएको छ। यो क्यान्सर जोखिम, उच्च रक्तचाप lowering र अल्जाइमर रोग को जोखिम घट्दै कम osteoporosis रोकन समावेश छ। जापानमा मान्छे पनि विश्वास छ कि तातो खातिर स्नान तपाईंको छाला moisturise लागि लाभकारी छन्।
केही यसलाई पहिलो 4800 मा चीन मा उत्पादन भएको थियो ई.पू.।विश्वास रूपमा4शाके, संसारमा सबैभन्दा पुरानो ज्ञात मादक पेय
5 प्राचीन जापानी brewers खातिर महत्त्वपूर्ण संघटक रूपमा थुक्नु प्रयोगछ।एक ढुसी खातिर सिर्जना प्रक्रिया चलिरहेको बेला चामल किण्व | | खमीर यी दिन प्रयोग गरिन्छ, तर एक पल्ट एक समय मा र्याल देखि इन्जाइमहरु को किण्वन प्रक्रियामा सहायता प्राप्त। गाउँलेहरू यो गर्न सँगै भेला थियो रूपमा खातिर मा समाप्त भयो। तिनीहरूले पहिले पलिश खातिर चामल चबाना र त्यसपछि एक कम्युनल पट मा आफ्नो रहलपहल थुक्नु हुनेछ। यी रहलपहल त्यसपछि पेय बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
चामल को6दुई प्रकार खातिर संलग्न छन्। यी kouji माई र kake माई भनिन्छ। राशि र भात यी प्रकार को मिश्रण गरेको छ कि खातिर प्रकार निर्धारण गर्नेछ। Kouji माई चावल विशेष खातिर बनाउने लागि ईन्जिनियर र kake माई अझ साधारण चामल रूपमा देखेको छ, जबकि, अधिक महंगा छ गरिएको छ।
7 खातिर को सबै भन्दा महंगा ब्रान्ड Wataribune द्वारा कुनै ओ खातिर kame छ। यो एक 720ml बोतल लागि $ 500 अमेरिकी मा Resales। को brewer यसको आधा प्रारम्भिक आकार तल चामल प्रत्येक अन्न Polishes रूपमा यो दाई ginjo वा प्रिमियम खातिर एक प्रकार हो। यसलाई जबकि अन्य sakes क्रस-नस्ल छ कि चामल प्रयोग गरिन्छ पनि चामल को एक ‘शुद्ध’ नस्ल संग, बनेको छ।
तिनीहरूले खाली र केवल सजावट लागि हो हुनत 8 शाके व्यारेल, शिन्टो shrines सजाउनु गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी व्यारेल जो सजावट व्यारेल अर्थ, kazaridaru भनिन्छ। यो खातिर धार्मिक कारण shrines र मन्दिर मा उत्पादन भएको थियो जब सम्बन्धहरु छ। तपाईं एक तीर्थस्थलका मा एक सजाया बैरल राख्न भने यो राम्रो भाग्य मानिन्छ।
9 शाके यो के सिजन छ आधारमा विभिन्न नाम हुन सक्छ र तपाईं कहाँ पिउन। जब तपाईं वसन्त अवधिमा Sakura रूखमुनि यसलाई पिउन Hanami खातिर छ। नयाँ वर्षको उत्सव अवधिमा sakazuki समतल पकवान संग खातिर पिउने र यो toso भनिन्छ। शरद ऋतु समयमा पूर्ण चन्द्र प्रशंसा र यो tsukimi खातिर भनिन्छ गर्दा पिउने। अन्तमा, yukimi खातिर जब तपाईं हिउँ गिरावट हेर्दै गर्दा घर भित्रका यसलाई पिउन छ।
10 दाखबारी वा बियर भठ्ठी भ्रमण जस्तै, तपाईं एक खातिर भठ्ठी भ्रमण लाग्न सक्छ। यस्तो सवाई जापान मा Ozawa शाके भठ्ठी रूपमा पर्यटक गन्तव्य, अंग्रेजी मा पर्यटन छन्। यसलाई माउन्ट Mitake नजिकै स्थित छ रूपमा विशेष यो भठ्ठी यसको सुन्दर दृश्य लागि ज्ञात छ।
जापानओसाकाम्याकोयाम्याकोया ओसाकाजापानी ट्राडिशनब्रेकरीपकाउनेचकोकोपिउनेपिसालगायतइजाकायाजोआनेससेक्चरजापानसेन्ड्रिकजापानीफूडजापानीसेकेककापईचावलसाकेशुकी